शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो कि ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो कि ?
२०७० श्रावण २५, शुक्रबार ०४:४६ गते
[author image=”https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn1/41713_730197519_576_q.jpg” ]केशव भट्टराई [/author]अहिलेको समय नै शक्ति प्रदर्शनको हो । हुनेखानेदेखि हु“दाखानेसम्म, माग्नेदेखि महाजनसम्म, सरिपदेखि हरिपसम्मले आफ्नो गच्छेअनुसारको शक्ति प्रदर्शन गरेकै हुन्छन् । शक्ति भन्नासाथ पहलमानको, रेस्लरको, कुस्तीवाजको, दादागिरीको ताकतका कुरा गरेको होला भनेर नसोच्नु भए हुन्छ । त्यसो भए सडकमा झुन्ड भएर नाराबाजी गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, गाडी जलाउने, चक्काजाम गर्ने, करङ भा“चिदिएर अस्पताल पु¥याइदिने, अपहरण गरेर फिरौती माग्ने, कञ्चटमा बन्दुक सोझ्याएर धम्काउनेजस्ता प्रकरणचाहि“ पक्कै शक्ति प्रदर्शन हुनुपर्छ भनेर सोच्नुभएको छ भने पनि तपाईं गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । अहिलेको शक्ति प्रदर्शन अलि बेग्लै किसिमको हो । अहिलेको के भनौँ, पहिलेदेखिकै हो । जसलाई पनि शक्ति चाहिन्छ, जसले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो ।
उसो भए के हो त शक्ति प्रदर्शन ? भनेर हत्तपत्त मेरो कठालो समातेर तपाईंले मलाई ¥याख¥याख्ती पार्न सक्नुहुन्छ । यति छिट्टै शक्ति प्रदर्शनको राज तपाईंले थाहा पाउनुभयो भने मज्जै पनि त आएन नि १ पत्रपत्रिकामा छापिने समाचारका ठूला–ठूला माखा टाउके शीर्षकमा फलानो पार्टीको शक्ति प्रदर्शन, ढिस्कानो जातिको शक्ति प्रदर्शन, राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन, उत्तर कोरियाको आणविक शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकाको सैन्यशक्ति प्रदर्शनजस्ता समाचार पढ्दापढ्दा दिक्क पनि लाग्दो हो । अनि खासमा शक्ति प्रदर्शन भनेकै यही हो भनेर शतप्रतिशत सहमत हुनु भए पनि यसमा पनि मेरो फरक मत छ । हेर्नुहोस् पाठक महोदय, केहीमा पनि शतप्रतिशत सही भन्ने हु“दैन । अपवाद त हरेकमा आइहाल्छ । तपाईं जे गर्नुहोस्, त्यो पूर्ण हु“दा पनि शतप्रतिशत हु“दैन । “सत्यमेव जयते” भनेर संस्कृतमा एउटा भनाइ कहलिएको छ । सत्यको सधैँ जित हुन्छ भन्ने भाव हो यो । तर, कहा“ शतप्रतिशत सत्यले जितेको अवस्था छ र ? छ भने भन्नुहोस्, तामा तुलसी छोएर । सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न होला । तर, अन्तिममा सत्यको नै विजय हुन्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । विश्वास पनि छ । यही विश्वासमा घात थपिदिएपछि विश्वासको पनि घात हँुदोरहेछ, अर्थात् विश्वासघात ।
तपाईंले कताको कुरा कता पु¥यायो भनेर सोचिरहनु भा’होला । हेर्नुहोस्, यसले पनि शक्ति प्रदर्शनको राज खोल्नमा घात हान्ने भो भनेर म माथि घातीको विशेषण झुन्ड्याइदिन सक्नुहुन्छ । तपाईंमध्ये कसैले घाती भने पनि म पक्षपातीचाहि“ छैन । पक्षपात नै नगर्नेले कहा“बाट घात गर्छ र ? यो तपाईं आफैँ विचार गर्नुहोला । यो दुईदिने जिन्दगीमा मरेर केही लानुछैन । लोभै गरेर पनि दिनमा दुई छाकभन्दा तीन छाक बढी खानुछैन । त्यसैले, शक्ति प्रदर्शनको राज खोल्न मैले जति समय लगाए पनि मस“ग नरिसाउनुहोला । रिसाए, रिसाउनेकै मुख कालो । त्यसपछि रिसाउने त मेरै पालो । कति कुरा घुमाएको होला, खुरूक्क नभनेर.. भन्ने सोच राखेर हुरूक्क हुन खोजे पनि समय नआई म भन्दै भन्दिनँ ।
फुर्सदका कुरा स्तम्भको नामैले पनि तपाईंले बिम्बमा कुरा बुझिसक्नु पर्ने हो । तपाईंस“ग फुर्संदले केही कुरा खोल्न भनेरै त म फुर्सदका कुरा लिएर आउ“छु नि ? जब तपाईं “इजी” कुरामा पनि एकदम “बिजी” हुनुहुन्छ, त्यसपछि न खाना खाने फुर्सद हुन्छ, न निदाउने फुर्सद । अहिले मस्त निदाउ“दा पनि फुर्सद नमिल्दा कति मान्छे हैरान भा’छन् । म पनि आरामले रातभर निदाउन सक्दिनँ, रातभरि सपना देखेर कुदेको कुद्यै गर्नुपर्छ । त्यही भएर यसो एकछिन फुर्सद भयो कि तपाईंलाई फुर्सदका कुरा भन्न मन लाग्छ ।
मेरो पनि मन बिसाउने ठाउ“ कहा“ छ र ! ज–जसलाई मन दिइएको थियो, उनीहरुले निर्मूल्य तनमा गा“ठो पारेर लगे । मन फर्काउन बिपनामा त सम्भवै छैन । सपनामैं भए पनि प्रयास गरिरहेछु । हेरौँ, कहिलेसम्म सपना देख्न सकिन्छ ? यतिसम्म निष्ठुरहरु पनि छन्, मन चोर्नेहरुले सपनाहरुको हत्या पनि गरिदिन सक्छन् । जब सपनाहरुकै हत्या हुन्छ, त्यसपछि त के नै बा“की रहन्छ र ? सपनाहरुको पनि हत्या गरिदिने निर्दयीहरुले पनि एकचोटि सबैले मर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । हेला“ गरेर फालेकै वस्तु पनि एक दिन काम लाग्न सक्छ । मरेपछि खरानी भइहालिन्छ । त्यसपछि घाम लागे पनि, पानी परे पनि, हावा चले पनि, रोकिए पनि के अर्थ हुन्छ र ?
हाम्रो घरगाउँमा एउटा विख्यात उखान छ नि, “जिउ“दाको जन्ती, मर्दाको मलामी ।” जिउ“दो हु“दा वास्तवमा जन्तीको आवश्यकता पर्दैन । दुई आत्माको मेल भो भने लावालस्कर जन्ती पनि चाहि“दैन । जन्तीबिनाको बिहेलाई “फ्लाइङ म्यारिज” भन्ने चलन छ । यो जन्ती भनेको एउटा विशुद्ध शक्ति प्रदर्शन हो । अनावश्यक हो, अर्थहीन हो, वाहियात हो । यस कुराको चुरो बुझ्नेहरुले बुझिसके, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड । बुझ्नेहरुले “अन्त जानु, जन्त नजानु” त्यसै भनेका चाहिँ होइनन् । जन्त गएर कन्तबिजोग भएका, पाउनु दुःख पाएकाहरुले जन्त नजाने निर्णय गरिहाल्छन् । हार्न नसकेर जानु अलग कुरा हो । कुरा बुझ्दै नबुझी मलाई कस्तो एकलकाँटे रहेछ भन्ने सोचिसक्नु भा’होला । म त्यो खाले चाहि“ होइन । बेहुलाले बेहुली पाउनुछ, दुई नया“ अपरिचितले नया“ सम्बन्ध गा“स्नुछ, जिन्दगीको यात्रामा सहयात्रा गर्नुछ भने अरु जन्ती आवश्यक नै किन प¥यो ? यसको सरल उत्तर एउटै छ– बेहुला वा बेहुली पक्षको शक्ति प्रदर्शन ।
यो बिलकुल शक्ति प्रदर्शन होइन भने बिहेमा लावालस्कर जन्ती किन चाहियो ? यतिवटा कार, यतिवटा बाइक, यति बस भनेर जन्तीभन्दा अघि नै सवारीसाधनको गणना किन हुन्छ ? होइन भने एउटा बिहेका लागि किन सयौँ जना जन्ती चाहियो ? सक्नेहरुले जे गरेर बिहे गरे पनि कसैले टाउको दुखाउनु जरूरी छैन । शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरुलाई त्यसले पार्ने सामाजिक असरस“ग के सरोकार ? शक्ति प्रदर्शन गर्नकै लागि होइन भने बिहेमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नु जरूरी छ र ?
नेपालमा हेलिकप्टर चढ्न सक्नेहरु मात्र होइन, अझ खरिँदै गर्न सक्नेहरु जति पनि छन् । सरकारको नेपाल वायुसेवा निगमले पो एउटा जहाज किन्न दस वर्ष कुर्नुपर्छ । कर्मचारीको सञ्चय कोषबाट ऋण लिनुपर्छ । किन्न नसकेर सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । नेपालीहरुले चाहनुपर्छ, सरकारले भन्दा अघि जहाज किनेर देखाइदिने क्षमता राख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न नेपालीहरुले बोइङ जहाज खरिद गरुन्, नेपालीहरुले विश्वस्तरका धनीमानीसरह खर्च गर्ने सामथ्र्य राखून् । अझै चन्द्रमामै पुगेर बिहे गर्ने स्तर वृद्धि हुन सकोस् । नत्र सुकुमबासी बस्तीभित्र हेलिकोप्टर चार्टर गरेर बिहे गर्दा एकछिन रमितेहरुको वृद्धि होला, अर्थात् मेरो भाषामा शक्ति प्रदर्शन होला । बिहेमा अनावश्यक तडकभडकसहित शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरुले समाजलाई असर परोस् या विकृति नै भित्रियोस्, के सरोकार !
फलानोको बिहेमा त कारमात्र सयवटा थियो, बाइक हजारको संख्यामा थिए, “ट्वीनअटर हायर” ग¥या रे..! यत्ति चर्चा पाउन वा यो अलि सम्पन्न रहेछ है भन्ने सन्देश दिनभन्दा अरु केही उपलब्धि छ भने भन्नुहोस् ? नेपालमा समुद्रले मात्रै नछोएर हो, नत्र पानीजहाज हायर गर्नेहरु लाइन बस्ने थिए होलान् । सक्नेहरुलाई करोड त के, अरबौँ खर्च गरेर बिहे गर्न पनि छूटै छ । बिहेमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु अपराधचाहि“ होइन । तर, बिहेमा हेलिकप्टर चढ्ने संस्कार बढ्दै जान थाल्यो भने आपराधिक क्रियाकलाप गरेरै भए पनि हेलिकोप्टर नैं चढ्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास हुने हो कि भनेर चिन्ता लागेको मात्र हो । एउटाले खर्च गर्नुछ, अर्कोलाई चाहि“ टाउको दुखाइ । यो नेपालीको साझा बानी नै हो नि ।
अब अर्को प्रदर्शन मलामीको हो । मर्दाको मलामी कसलाई नचाहिने हो र ? तर, मलामी पनि एउटा शक्ति प्रदर्शनजस्तै भएको छ । फलानो मर्दा त यति सय कार, यति सय बाइक थिए भनेर मलामीभन्दा अघि नै सवारीसाधन गन्ने प्रवृत्तिले नमज्जास“ग जरो गाडिसकेको छ । यसको जरा उखेल्ने प्रयास गरियो भने समाजविरोधी भइएला भन्ने डर लाग्छ । मलामी जा“दा कार, बाइकको ता“ती लाग्नु शक्ति प्रदर्शन हो जस्तो तपाईंलाई लागेन ?
आफ्नो भाग र भोग सकिएपछि मर्ने मरेर जान्छ । बा“च्नेहरुलाई दुःखको बेला आफ्ना आफन्त र बन्धुबान्धवहरुको सहयोग चाहिन्छ । आफ्ना आफन्त मर्दा दुःखको बेलामा सहानुभूति दिन र पीडा बा“ड्दै दाहसंस्कारमा सहयोग पु¥याएर किरियापुत्रीस“गै घर फर्किनु खासमा मलामी जानु हो । दाहसंस्कार अवधिभर घाटमा बसेर अन्तेष्टिसम्म सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर शक्ति प्रदर्शन गर्न कार, बाइकमा गएका मलामीहरु एउटा चिर्पट बोक्न त के, घाटमा प्रवेशै नगरी पवित्र तीर्थस्थलमा मांस–मदिराले लठ्ठिएर घर फिर्छन् भने तपाईं आफैँ भन्नुस्, त्यो व्यक्ति मलामी गएको हो कि शक्ति प्रदर्शनका लागि लस्करमा सहभागी भएकोे हो ? मैले चाहि“ बुझ्न सकेको छैन ।
देखावटी सहभागिता र सस्तो लोकप्रियताका लागि मलामी गएकाहरुको मन एक क्षण पनि शान्त हुन नसक्नुु र तिनै मलामी महोदयहरुको स्वागत गर्दै पवित्रस्थलमा पनि मांस–मदिरा खुवाउनु कहा“सम्म जायज हो ? अनि, धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले यस्तो रमिता हेरेर मात्र बस्छ कि काम पनि गर्छ ? वा उनीहरु स्वयंको सोमरस व्यवस्थापनका लागि भट्टी सञ्चालन गर्न दिइएको हो, कुरा बुझिनसक्नु छ । धार्मिक क्षेत्र भनिएपछि रोजगारका लागि माला बेचेरै गुजारा चलाए पनि हुन्छ । फूल–प्रसाद बिक्री गरे पनि मन प्रसन्न त हुन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा त्यो झोल किन फुकुवा भएको होला ? मांस–मदिरा खान शक्ति प्रदर्शनको लाइन बढाउन जानेहरुलाई अलिकति पनि ग्लानि हुँदैन होला ? मलाई अचम्म लाग्छ । शक्ति प्रदर्शनको राज बल्ल मैले खोलेँ, यसमा तपाईंहरुको फरक मत केही छ कि ? भएदेखि फुर्सदमा बताउनुहोला ।